Isikhwama Sokuthengaabakhiqizi nabahlinzeki | YOUCCO
Ikhaya > Imikhiqizo > Isikhwama sansuku zonke > Isikhwama Sokuthenga
I-Youcco ihlinzeka zonke izinhlobo zesikhwama sezitolo esisezingeni eliphakeme sokuthenga esikhwameni sokuthenga kabusha izikhwama zokuthenga kabusha ngentengo yokuncintisana kakhulu, ukuvikela umhlaba wethu manje, amazwe omhlaba manje esenqabe manje ngento enhle Izikhwama ezisheshayo zokudla izikhwama zezitolo eChina, Ifektri yethu itholakala ku-Xiamen. Kungamamitha-skwele angama-3000 kanye nabasebenzi abangama-80. Kukhona ukukhiqiza okuphelele kokusika, ukuthunga, ukuphrinta, ukuhlola, ukupakisha nokuthumela. Ifektri yethu ingafinyelela ku-Max Month nyangazonke iyunithi yenyanga engu-1,500,000. Kudlule isitifiketi se-BSCI ne-ISO9001.
Senza izikhwama zokuthenga ezihlanzekeze zisebenze ngosayizi omkhulu, omncane, imibala ehlukene kufaka phakathi imibala ejwayelekile eluhlaza, obomvu, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, amasosha asemuva, ophuzi njll. Siphinde sibe nombala oqinile ongaphezu kwe-100 Ukuze uthole inketho, senza i-Odm design yamaphethini ngenkathi yamukela amaphethini we-OEM, ukufeza izimfuno ezahlukahlukene. Senza izikhwama ezikhwameni zendwangu ezahlukahlukene, isilwane esiphindaphindwayo, i-polyester, i-nylon ethambile, izinto ezithukiwe njll.
Izikhwama zezitolo ezinhle kakhulu ezibunjiwe
Lesi sikhwama sezilwane ezinhle esikhanyisiwe sokuthenga, kungenye yezikhwama zethu zokuthenga ezinhle kakhulu emakethe. Iphelele kakhulu nge-Daily and Shopping yakho yansuku zonke. Ingasetshenziswa njengezikhwama ezinhle kakhulu zokudla ezitolo. I-eco-enobungane futhi isebenza kabusha. Vele uzizwe ukhululekile ukuxhumana nomhlinzeki we-Youcco ngezinketho eziningi.
Izikhwama zokuthenga ezisebenziseka kabusha ze-mummy
Lesi sikhwama sokuthenga esisebenzisekayo singasetshenziselwa yonke imisebenzi yakho, ikakhulukazi kanye nengane yakho. I-IIT isikhala esikhulu, esingasindi, silungele ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe-mummy.Kukhona imichilo emibili yezinhlangothi zombili. Bangasebenzisa ukubamba isikhwama enqoleni yengane bese bebeka izandla zakho zikhululekile. Kwenziwe kusuka ku-100% polyester, isikhwama sokuthenga sisula kalula sihlanzekile ngamanzi abandayo. Ungayigoqa nje bese ubeka ezikhwameni zakho noma uyilondoloze ebhokisini lokubonisa.
Ukuphromotha Okuphansi Kwe-Moq Convas Tangerable Canvas Tote Shopping Bag 210111
Lesi sikhwama silungele ukukhushulwa njengesipho. Kuyisitayela esijwayelekile sesikhwama seTote Tote. Futhi kuyisikhwama sezitolo esiphakeme esiphansi se-moq eco. Singaphrinta noma yini esikhwameni esine-moq ephansi ngempela, i-1PC ingenziwa. Lokhu kungukukhetha okuhle kwesikhangiso se-logo ye-logo. I-logo eyenziwe ngokwezifiso, iphethini nobukhulu bamukelekile kakhulu, vele usithumele isicelo sakho.
Lesi sikhwama Sokuthenga Esivuselelwayo Sokuthenga esisebenzisekayo, silungele ukuthengiswa futhi sithuthukise iphrofayili yenkampani yakho. Kubukeka njengesithelo esihle ngemuva kokugoqa. Yisitayela sesikhwama sezithelo sezithelo esifinyelela kuma-15kgs. Ilungele izingane zakho zansuku zonke nezitolo. Vele uthinte umphakeli wesikhwama se-Youcco Shopping Shopping ngezinketho eziningi.
Ilogo Low Moq Custom Logo Gount Canvas Tote Bag 210110
Kuyisikhwama esiyisisekelo nesisekelo se-canvas tote. Ikhwalithi ephezulu ye-MOQ ephezulu ye-100% kakotini kakotini wokuthenga. Singangeza ilogo yamakhasimende noma noma iyiphi iphethini kanye nosayizi design esikhwameni, noma amakhasimende adinga nje i-1PC. Into enhle ngempela ekuhlolweni kwamakhasimende emakethe nge-Qty ephansi. Lesi siko esiphansi se-MOQ sountiwe swork canvas tote isikhwama silungele ukunyuswa kanye nesipho.
I-Youcco yanikeza izikhwama zokuthenga ezivusekiso ze-nylon ezitolo zokudla ezitolo
SKU DS201202Yehlisa ukusetshenziswa kwezikhwama ezilahla imfucuza futhi uthathe lesi sikhwama sokuthenga esisebenzisekayo kuyo yonke imisebenzi yakho. Feather Light futhi amancane ngokwanele ukuba angenise ephaketheni lakho, lezi zikhwama zisebenza ngokuphelele. Kwenziwe nge-100% nylon, isikhwama sokuthenga sisula kalula sihlanzekile ngamanzi abandayo. Kunemibala eqinile emi-3 eqinile, elungele abesilisa nabesifazane. Imibala emihle emihle ayimihle nje yokuthenga okuthe xaxa, ilungele ibhishi, ama-picnics, uhambo, ukugcinwa kanye nezikhathi eziningi.
Okungeziwe Okungeziwe Okungaphezulu Kwe-Eco Shopping Tote Izikhwama Isikhwama Sokudla Okuphelelisiwe kusuka kumhlinzeki wezikhwama ze-Youcco
UBella ufisa wonke amakhasimende Merry Christmas&amp; Jabulela unyaka omusha. Kule vedio, uBella wethula esinye sezikhwama zethu zokuthenga ezithandwayo- engeziwe izikhwama ezinkulu zokuthenga ezinamathele, ziyasebenza futhi ziyageza ngokuphrinta okugcwele nge-Big Gort Gote, i-Nylon ethambile Izikhwama zokudla, izikhwama ze-eco, izikhwama ezingenamanzi ngisho nokuhlambalaza izikhwama ze-tote, esikhwameni sevidiyo, amakhasimende ethu akhetha i-polyester ngentengo yezitolo epulasitiki. I-Youcco ihlinzeka ngaphezu kwama-50 fabirc, imibala eqinile eyi-100 nazo zonke izinhlobo zokuphrinta zokuphrinta. I-OEM design yamukelekile.